Khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay Jeneraal Xuud iyo Maamulka Gobolka Hiiraan. | Warbaahinta Ayaamaha
Khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay Jeneraal Xuud iyo Maamulka Gobolka Hiiraan.
BELEDWEYNE-AYAAMAHA-Janaraal Abuukar Xaaji Warsame oo loo garanayo Janaraal Xuud oo in muddo ahba ka soo horjeeday maamulka Hirshabeelle ayaa beeniyay in isagu uu lahaa mas’uuliyadda dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, wuxuuna sidoo kale beeniyay in uu xiriir kala dhaxeeyo ururka Al-Shabaab.
Maammul la yirahdo Hirshabelle kama jiro Hiiraan . Waxa dhacaya oo dhan, waxay u dhacayaan waa intaa. Sida dowladda federaalka khasabka iyo juujuubka ah ee ay ku dhisatay (maamulka Hirshabelle) si aan aqbali karno oo aan yeeli karno ma aha. Annaga Hiiraan baa nala yirahdaa…gobolkan waa gobol gobolladii kale ka haray, xaqdarrada intaasi la’eg oo nagula sameeyay ayaan ka dhiidhinay oo aan diidannahay”, ayuu yiri Janaraal Xuud.